४ दिनपछि अवकास पाउँदै नेपाल प्रहरीका आइजीपी खनाल, काे बन्ला भावी आइजीपी ? – Upahar Khabar
४ दिनपछि अवकास पाउँदै नेपाल प्रहरीका आइजीपी खनाल, काे बन्ला भावी आइजीपी ?
प्रकाशित मिति : २४ माघ २०७६, शुक्रबार ११:२५ February 7, 2020
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले माघ २८ गते ३० वर्षे सेवा अवधीका कारण नियमित अवकाश पाउँदैछन् । आईजीपी खनालसँगै ३ एआईजी र १८ जना डीआईजीले पनि एकैपटक अवकाश पाउँदैछन् । खनाल नेपाल प्रहरीका २६ औं आईजीपी हुन् ।
खनालसँगै एआईजी पुष्कर कार्की, धिरु बस्न्यात र ठूले राई अवकाशमा जाँदैछन् ।
यता एसएसपी दिलिपसिंह बस्नेतले पनि सोही दिन अवकास पाउँदैछन् । आईजीपी खनालसँगै सबै २९ माघ २०४६ मा प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । एकैदिन सेवा प्रवेश गरेकाले उनीहरू सबै एकदिन अवकाश पाउन लागेका हुन् ।
चार दिनपछि अवकाशमा जान लागेका आईजीपी खनाल विदा बसेका छैनन् । सामान्यतया सुरक्षा फौजको प्रमुख अवकाश हुुनुभन्दा एक महिनाअघि बिदा बसेर भावी नेतृत्वकर्तालाई कायममुकायम दिने प्रचलन हुन्छ । तर, सरकारले नेपाल प्रहरीमा नयाँ आईजीपीको नाम तय नगर्दा खनाल बिदा नबसेका हुन् ।
नेतृत्व विकास प्रणाली नहुँदा नेपाल प्रहरीमा फेरि डीआईजीबाटै आईजीपीमा बढुवा गरिने भएको छ । यसअघि दुईपटक एआईजीको अनुभव नभई २ जनालाई आईजीपी बनाउँदा समस्या देखिएको जनाउँदै फेरि पनि उही प्रक्रिया दोहोरिँदा संगठन कमजोर हुने भन्दै प्रहरी अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
हालका आईजीपी खनाल पनि डीआईजीबाट सीधै आईजीपीमा बढुवा भएका हुन् । त्यसअघिका प्रकाश अर्याल एआईजी नभई डीआईजीबाट आईजीपी भएका हुन् । यसरी एआईजीको अनुभव नै नभई प्रहरी नेतृत्व सम्हाल्दा संगठनमा नकारात्मक असर देखिन थालेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
खनालको अवकाशसँगै २७ औं प्रहरी प्रमुखका लागि पहिलाको जस्तो दौडधुप नरहेको प्रहरी हेडक्वार्टर स्रोतको भनाइ छ । कसले गर्लान् त झण्डै ८० हजार प्रहरीको नेतृत्व ? खनालकै वैकल्पिक टोलीका रुपमा भर्ना भएका ठाकुर ज्ञवाली भावी प्रहरी प्रमुखको प्रवल दाबेदार मानिएका छन् । हाल ज्ञवाली प्रदेश १ को प्रहरी प्रमुख हुन् ।
यू–१९ विश्वकप २०२० को फाइनलमा बङ्गलादेश
कोरोना भाइरसका लक्षणहरु, संक्रमणबाट बच्न के गर्ने ?